के तपाइको कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ?घरैमा बनाउनुहोस् सरल तरिकाले “एन्टी हेयरफल” तेल ! – News Nepali Dainik
के तपाइको कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ?घरैमा बनाउनुहोस् सरल तरिकाले “एन्टी हेयरफल” तेल !
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २८, २०७७ समय: ७:५९:२७
एजेन्सी – कपाल झर्नु, पातलो भएर तक्लु नै हुनु, लामो र मुलायम नहुनु जस्ता प्राय जसो मान्छेको समस्या नै हो। सयमा १० जनाको मात्र सोंचेको जस्तो कपाल हुन सक्छ तर बाँकीले यस्तै समस्याहरु झेलेकै हुन्छन्।
सामान्यतय: हामी कपाललाई लामो बनाउने निहुँमा अनेक औषधि उपचार विधि अपनाउँछौँ, जुन त्यति प्रभावकारी र फाइदाजनक हुँदैन। त्यसकारण आज हामी यस्तो गोप्य विधि बताउन गइरहेका छौँ, जुन एकदम लाभदायी र चमत्कारिक छ। जडीबुडीबाट बनाईने यो तेललाई सरल र छरितो तरिकाबाट बनाउन सकिन्छ।
यसका लागि चाहिने सामग्री: निम पात, नरिवल तेल, क्यास्टर तेल::
बनाउने विधि: सुरुमा निमको पातलाई मिक्स्चरमा राखेर पिस्नुहोस् र बाक्लो पेस्ट बनाउनु होस्। पेस्ट बनिसकेपछी एउटा कचौरामा नरिवल को तेल राख्नु होस्। एउटा कराईमा पानी राखेर यसको माथिबाट नरिवलको तेलको कचौरालाई राखिदिनु होस्। नरिवलको तेल तात्न थालेपछी यसमा क्यास्टर तेल हाल्नुहोस्। यी दुई तेल राम्ररी ताते पछी निमको पातको पेस्ट राखीदिनुहोस्।
त्यसपछि यी सामग्रीहरुलाई १५ मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। त्यसपछि ग्याँसलाई अफ गरेर यो यस निमको तेललाई चिसो हुन छोडीदिनुहोस्। चिसो भइसकेपछी यसलाई छान्नेको माध्यमबाट छान्नुहोस्।
यसबाट निस्केको तेललाई एउटा कन्टेनर अर्थात् बोत्तलमा हालेर राख्नुहोस्। यस निमको तेललाई तपाइँ ६ महिनासम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।लगाउने विधि: यस तेललाई कपाल र स्क्यल्पमा लगाएर मसाज गर्नुहोस् र १ घण्टा सम्म राख्नुहोस्। १ घण्टा पछी कपालमा स्याम्पु लगाएर धुनुहोस्। यो तेल लगाउनले कपाल सम्बन्धि सम्पूर्ण समस्याहरु हटेर जानेछ।एजेन्सीको सहयोगमा
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? कतै यी ९ समस्याले ग्रसित त हनुहुन्न !
कपाल झरेर हैरान भइयो के गर्ने ? अहिले यस्तो गुनासो बाक्लिदै गएको छ ।कपाल झर्नु एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, अस्वभाविक रुपले कपाल र्झछ भने त्यो चिन्ताको विषय हो । कपाल झर्ने क्रम रोकिएन भने टाउको मुडुलो हुन्छ ।
कपाल किन र्झछ ? यसको एकमात्र जवाफ छैन । हालैको एक अनुसन्धानले भनेको छ की पुरुषमा आउने यस्ता समस्याको आम कारण अनुवांशिक हुने गर्छ । जवकी महिलामा स्त्रीमा भनेउ तनाव चिन्ताको कारण कपाल झर्ने गर्छ । यति मात्र होइन, कपाल झर्नेको थुप्रै कारण छन् ।
नुहाएपछि कपाल सुकाउनका लागि प्रायले हेयर ड्राइअरको सहायता लिने गर्छन् । यो कपाल सुकाउन र हेयरस्टाइल बनाउनको लागि त तरिका हुन सक्छ । तर, कपालको स्वास्थ्यको लागि पनि त्यत्तिकै हानीकारक । अनुसन्धानले नै भनेको छ की कपाल बनाउनका लागि हरेक दिन यस्ता सामाग्रीको प्रयोग गर्दा कपाल विग्रीदै जान्छ । लगातार आफ्नो कपाललाई सिधा या घुम्रो बनाउने उपचार नै कपाल झर्नेको प्रमुख कारण बन्न सक्छ ।
महिलामा गर्भावस्था र प्रसवको क्रममा शरिरमा हर्मोनको मात्रामा उटारचटाव आउने गर्छ । यस्तो बेला महिलामा अत्याधिक कपाल झर्ने समस्या हुन्छ । थाइराइड हर्मोनको असन्तुलन, म-हिनावारी बन्द हुने या अन्य हर्मोनसम्बन्धि गडवढीको कारण तीव्र मात्रामा कपाल झर्ने समस्या हुन्छ ।
हाम्रो शरिरबाट बढी मात्रामा उर्जा वाहिरिने गर्छ । यसकै कारण तनावको मात्रा पनि बढेर जाने गर्छ । बढी मानिसमा यस्तो देखिन्छ की बढी तनावकै कारण उनीहरुको कपाल झर्ने गर्छ । यसको कारण कपालमा अन्य समस्या पनि देखिने गर्छ ।
कपाल झर्नुको प्रमुखमध्येको एउटा कारण भनेको बंशाणुगत पन हिो । यस्तो समस्यामा तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न । यत्ति हो उचित आहार र विहारलाई जीवनशैलीसँग जोडेर कपाल झर्ने सम्भावनालाई कम गर्न सक्नुहुन्छ ।
स्याम्पु, कन्डस्नर देखि कपालमा लगाउने तेलसमेत रसायनयुक्त आउन थालेको छ । यस्ता प्रडक्टले कपालाई कैयौँ क्षति पुर्‍याउने गर्छ । आजभोलीका अधिकांश कस्मेटिक उत्पादनमा हानिकारक रसयानको मिश्रण गरिएका हुन्छन् । जुन कपाललाई कमजोर बनाउनुका साथै कपालसम्बन्धि अन्य गम्भीर समस्या निम्त्याउने गर्छ । त्यसैले, यस्ता प्रडक्टको प्रयोग गर्दा निकै सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ ।
हामी औषधी उपचारमा लाग्ने गर्छौँ । यसरी प्रयोग गरिने औषधी कपालको स्वास्थ्यको खराव असर पर्ने गर्छ । कुनै ड्र-ग्सको प्रयोग र भारी खानाको सिधा सम्बन्ध पनि कपाल झर्ने र लट्टा पर्नेसँग हुन्छ ।
Last Updated on: February 10th, 2021 at 8:24 am